गौरव पहारी गल्लि क्यान्टिन खोलेर व्यवसायमा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
गौरव पहारी गल्लि क्यान्टिन खोलेर व्यवसायमा
Banner Newsआजको गफ गाफ
१ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०८:०० 106
सिनेमा मञ्जरीबाट नेपाली सिने नगरीमा ठूलो सम्भावना बोकेर भित्रिएका कलाकार हुन् गौरव पहारी । बरिष्ठ कलाकार टिका पहारीका सुपुत्र समेत रहेका गौरव साहिँली गीत मार्फत सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार पनि बने । करिब एक दर्जन सिनेमामा अभिनय जादू देखाईसकेका गौरबलाई धेरैले साहिँला भनेर सम्बोधन गर्न थालेका छन् । तिनै साहिँला हालसालै चाहि के गर्दैछन् ? प्रभात लामाले गरेको आजको गफ ।
अहिलेको अवस्थामा गौरव पहारी कहाँ हो ?
गौरव पहारी यतिबेला घरको बेडमा सिरक ओडेर सुतिरहेको अवस्था हो । हाँसो ।
सुत्नै पर्ने अवस्था कसरी आयो ?
हाँसो । मतलव म अस्वस्थ भएर होइन । यसो आराम मात्रै गरेको हो । धेरै दिन देखि म सिनेमाको सुटिङ , म्युजिक भिडियो , आफ्नै विजनेसको काम सबैले थकान दिइरहेकोले आज चाही आरामले घरमा ओछ्यानमा बसिरहेको हो ।
बिजनेस भन्नुभयो । के हो त्यस्तो ?
यसो सानो तिनो विजनेस । मतलव हातिसारमा म , मेरो ज्वाई र एकजना साथी मिलेर हातिसारमा गल्ली क्यान्टीन खोलेका छौँ । त्यसैको कामले अलि व्यस्त नि बनायो ।
गल्लि क्यान्टिन कस्तो खालको क्यान्टीन हो ?
त्यो चाहि हाम्रो स्कूल , कलेजमा हुने क्यान्टीन हुन्छ नि हो त्यस्तै खालको क्यान्टिन हो । यसमा कलेजको झझल्को दिने खालको सेटअप पनि गरेका छौँ । सम्पुर्ण खानाको परिकार पाइन्छ । तपाई पनि आउनु होला । हाँसो ।
क्यान्टिनमा किन चासो तपाईको ?
होइन । म कलाकारिता तिर लागे पनि आफ्नो व्यवसाय र छुट्टै काम होस् भन्ने मलाई पहिला देखि नै लागेको थियो ।त्यसैको सोँच अनुसार खोलेको हो । तर म यसमा पुरै समय लाउने भन्दा पनि साथीभाईको संलग्नता अलि धेरै हुनेछ ।
यो व्यवसायको नयाँ खबर पछि सिनेमामा चाहि के हुदैछ तपाईँको ?
अव हामी साहिँलीको छायांकनमा जाने अन्तिम तयारीमा थियौँ । फागुनको पहिलो साताबाट फ्लोरमा जाने तयारी भए पनि साहिँलीको (मेनुका प्रधान ) दुर्घटना पछि घाईते अवस्थाले गाह्रो पारेको अवस्था हो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भए पछि हामी फ्लोरमा जान्छौँ । सायद अब फागुनको अन्तिम साताबाट काम धमाधम सुरु हुनेछ ।
हिट गीत साहिँलीमा सिनेमा बनाउदै हुनुहुन्छ । प्रेसर त राम्रै होला नि ?
त्यो त छ । जम्मा तीन मिनेटको गीतले यति ठूलो चर्चा र लोकप्रियता दिएको छ । हाम्रो परिचयमा साहिँला , साहिँली थपिदिएको छ । यस्ले गर्दा सिनेमा राम्रो भन्दा राम्रो बनाउन निक्कै दवाव परेको छ । यसैको लागि निर्देशक तथा लेखक रामबाबु गुरुङ अझै पनि स्क्रिप्टमा घोत्लीरहनु भएको छ । एक किसिमको राम्रै दवाव हाम्रो दिमागमा परेको छ ।
त्यही हो । अब म कलाकार मात्रै होइन । एक कदम अगाडि बढेर निर्माता भएको छु । साहिँलीमा हाम्रो जिएच प्रोडक्सन , हेमन्त राना , कालिप्रसाद बासकोटा , निर्देशक रामबाबु गुरुङ , दयाह्याङ राई , मेनुका प्रधान , म लगायत सबै जना तपाईहरुको माझमा साहिली लिएर आउने तयारीमा लागेका छौँ । विगतका दिनमा जसरी मलाई माया गर्नुभएको थियो । त्यसरी नै मलाई निर्माताको रुपमा पनि माया गर्नु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
दयाको पारिश्रमिक २० लाख तर चुपचाप
आजको सिनेमा ‘लालजोडी’
अब कान्छी २ बनाउँ कि माइली बनाउँ ? —स्वेता खडका